Motorola Moto Esge S waxaa la bilaabi doonaa Janaayo 26 | Androidsis
Motorola waxay sameyn doontaa dhaqaaq cusub mudo ka yar usbuuc. Su'aal ahaan, wuxuu soo saari doonaa taleefan casri ah, tanina waxaa lagu shaaciyey boodhadh rasmi ah oo uu daabacay saacado yar uun ka hor, kaas oo ku xusan Moto Edge S, mobilka ku dhow inuu suuqa ku dhufto sida «dhamaadka sare ee jaban».
Qalabkani wuxuu yeelan doonaa astaamo iyo faa'iidooyin dhammaad leh, sidaa darteed wax yar kama filayno, in kasta oo ay xaqiiqdu tahay in uu ku faani doono qiimo xoogaa ka hooseeya kan taleefannada gacanta. Waxaan horeyba uga ogaanay qaar ka mid ah sifooyinkiisa waxyaabihii sirta ee la soo dhaafay, wax walboo aan ka ogaanana waxaan hoos kuugu sheegi doonaa
Maalmo yar gudahood Motorola Moto Edge S cusub ayaa la soo saari doonaa
26-ka Janaayo waa taariikhda la bilaabayo ee la doortay si loo soo bandhigo Motorola Moto Esge S. Boodhadhka ay daabacday soo saaraha, ayaa lagu xusay ka cusub ee dhowaan lagu dhawaaqay ee Snapdragon 870, oo ah Qualcomm chipset oo loogu talagalay taleefannada gacanta ee dhammaadka leh oo leh astaamo horumarsan Qiimo jaban oo ka badan inta aan ka heli doono mobilada Snapdragon 888 sanadkaan oo dhan. Taasi waa sababta taleefanka cusub loo filayaa inuu noqdo "mid aan qaali ahayn."
Sida ku xusan qoraalada hore qaarkood oo asal ahaan ka soo baxay sifeynta, terminal-ka wuxuu ku dhufan doonaa suuqa shaashad dhan 6.7-inch iyo FullHD + qaraar. Heerka dib u cusbooneysiintu wuxuu noqon doonaa mid aan caadi ahayn, maxaa yeelay halkan waxaan ka heli doonnaa mid ka mid ah 105 Hz.
Dhinaca kale, Motorola's Moto Edge S waxaa lagu bilaabi doonaa RAM ah 8 ama 12 GB iyo meel gudaha ah oo lagu kaydiyo gudaha taas oo noqon karta 128 ama 256 GB. Batariga wuxuu noqon lahaa 5.000 Mah, halka kamarada gadaal ay lahaan laheyd a 64 MP shidma weyn iyo 16 MP xagal ballaaran. Kaamirada sawir qaadaha ah waxay noqoneysaa 8 MP. Waxaan sidoo kale u isticmaali lahaa Android 11 oo leh 'ZUI' sidii lakab qaabeyn ah. [Baro: Motorola One 5G Ace, mobilada cusub ayaa horey loogu sii daayay Snapdragon 750G iyo 5000 mAh baytari]
Qiimaheeda wali waa wax qarsoodi ah, laakiin marka la eego ereyga "qiimo jaban" oo dadka qaar ay ku bixiyaan, waxaan fileynaa in loo soo bandhigo calaamadda ku dhow 600 euro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Motorola Moto Edge S waxaa la bilaabi doonaa Janaayo 26 iyada oo ah qiimo jaban